Global Voices teny Malagasy · 2 Aogositra 2013
02 Aogositra 2013
Tantara tamin'ny 02 Aogositra 2013
Navotsotr'i Sodàna atsimo Ireo Mpanao Gazety Ogandey Nosamborina
Oganda 02 Aogositra 2013
Nampiasa ny teny ifankafantarana #FreeUgandaJournos tao amin'ny Twitter ny mpiasan'ny fampitam-baovao hanerena ny filohan'i Sodàna Atsimo hamotsotra ireo mpanao gazety.
#FreeSafy – Bilaogera Nosamborina Vao Maraimbe Tao Bahrain
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 02 Aogositra 2013
Nosamborina vao maraimbe ilay bilaogera Bahrainita Mohammed Hassan. Noraofin'ny polisy ny findainy sy ny solosainy. Miantso ho amin'ny famotsorana azy ny mpiserasera.
Namoy Ny Ainy I Christian Benítez, Mpilalao Baolina Ekoateriana
Amerika Latina 02 Aogositra 2013
Nalahelo noho ny fahalasan'i "Chocho" Benitez, mpilalao baolina kitra Ekoateriana ao amin'ny Klioba América [Meksika] ireo mpanohana azy.
Lehilahy Nitoraka Baomba Ny Seranam-Piaramanidin'i Beijing: Mpampihorohoro sa Niharam-boina ?
Azia Atsinanana 02 Aogositra 2013
Nanapoahan'ny lehilahy iray baomba, lehilahy mandeha amin'ny seza natokana ho an'ny malemy, izay milaza fa kilemaina noho ny kapoka nataon'ny mpitandro filaminana azy tamin'ny 2005, ny seranam-piaramanidin'i Beijing.
Tonizia: Miaramila Valo Tratran'ny Kendritohina Maty, Mitohy ny Gidragidra Politika
Mitohy ny gidragidra politika ao Tonizia taorian'ny vela-pandrika nahazo ny miaramila ka nahafatesana 8 tamin'izy ireo tany Chaambi. Andro vitsivitsy monja taorian'ny namonoan'olona mitam-piadiana nandeha soavalivy ny depioten'ny mpanohitra Mohamed Brahmi no nitrangan'ity raharaha ity.
Alemaina: Hetsi-Panoherana Fanaraha-maso Fomba “Big Brother”
Alemaina 02 Aogositra 2013
#StopWatchingUs no teny ifampifehezan'ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Asabotsy 27 jolay tao Alemaina. Manohitra ny fanaraha-maso ataon'ny sampam-pitsikilovana sy ny tsy fihetsehan'ny governemanta ny mpanao fihetsiketsehana.